URobert Boyle | Makhe Sicaphule Kuvimba
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu
Abathandi bezembali basenokukhumbula uRobert Boyle njengesazinzulu ekwathiywa ngaso umthetho kaBoyle—umthetho wendalo osenza siqonde unxibelelwano olukhoyo phakathi kwamandla egesi kunye nobungakanani bayo. Uphando lwakhe ngezenzululwazi lwahlahl’ indlela yolunye oluninzi olwalandelayo. Noko ke, uRobert Boyle wayengesosazinzulu nje kuphela. Kuthiwa wayeyindoda eyayikholelwa kakhulu kuThixo nakwiLizwi lakhe eliphefumlelweyo iBhayibhile.
UBOYLE wazalwa ngowe-1627, ephuma kwintsapho yezinhanha eyayihlala eLismore Castle, eIreland. Ngelo xesha, kwakusele kumbovu ukuba kufike ixesha ababhali-mbali abalibiza ngokuba lixesha lengqiqo—ixesha laxa amadoda akrelekrele azama ukuzikhulula kumakhamandela awayekhobokise abantu kangangeenkulungwane. Nalo kaBoyle wakuxhasa oko. Kwincwadi yobomi bakhe awayibhala xa wayeselityendyana, wazithiya igama elithi Philaretus, elithetha “Umthandi woKulunga.”
UBoyle wayengathandi nje inyaniso, kodwa wayekuthanda nokuxelela abanye ngoko akufundileyo. Waba ngumbhali ophum’ izandla, yaye iincwadi zakhe zaba nefuthe kakhulu koogxa bakhe, kuquka nesazi-nzulu esidumileyo uMhlekazi uIsaac Newton. Ngowe-1660, uBoyle waba ngomnye wabaseki beRoyal Society, iziko lezeNzululwazi elisekho unanamhla oku eLondon, eNgilani.
INDODA EYAYITHANDA EZENZULULWAZI
Kuthiwa uBoyle nguyise wezifundo zemichiza. Indlela awayezenza ngayo izinto yayahluke gqitha kweyezazi-nzulu zomhla wakhe. Kaloku zona zazingazipapashi iziphumo zophando lwazo, okanye xa zithe zazipapasha zazizibhala ngolwimi oluntsonkothileyo ukuze ziqondwe kuphela ngabantu abambalwa. Ngokwahlukileyo kuzo, uBoyle yena wayezipapasha iziphumo zophando lwakhe. Ngaphezu koko, kunokuba amkele nantoni na awayefike sele ikho, uBoyle wayekholwa kukuzivavanya ngokwakhe iziphumo zophando ukuze abone ukuba ziyinyaniso kusini na.
Uhlolisiso lukaBoyle lwaluxhasa uluvo lokuba nantoni na eyakhiweyo iyilwa ngamasuntswana ezakhi amaninzi.
Indlela awayelwenza ngayo uphando ichazwe kakuhle kwincwadi yakhe edumileyo, ethi The Sceptical Chymist. Kule ncwadi, uthi izazi-nzulu zifanele ziyeke ukuba nekratshi nokufundisa iimbono zazo, kwaye zimele zizivume iimpazamo zazo. UBoyle wakwathi abo babebambelele kakhulu kwiimbono zabo babefanele bahlule phakathi kwezinto ababezazi ukuba ziyinyaniso nezo babecinga ukuba ziyinyaniso.
UBoyle wakwathi abo babebambelele kakhulu kwiimbono zabo babefanele bahlule phakathi kwezinto ababezazi ukuba ziyinyaniso nezo babecinga ukuba ziyinyaniso.
UBoyle wenza ngendlela efanayo nakwizinto zobuthixo. Oko wakufumanisayo ngendalo nangendlela entsonkothileyo ezenziwe ngayo izinto eziphilayo kwamenza waqonda ukuba kukho uMenzi noMdali. Ngoko, wayikhaba ngaw’ omane imfundiso yokuba akukho Thixo, eyayinwenwa okomlilo wedobo phakathi koongqondo-ngqondo bemihla yakhe. UBoyle wafikelela kwisigqibo sokuba akakho umntu onengqondo nonyanisekileyo onokungakholelwa kubukho bukaThixo.
Noko ke, uBoyle akazange acinge ukuba umntu wayenokuncedwa yingqondo yakhe kuphela ukuze azi uThixo. Wayesithi abantu banokumazi uMdali kuphela xa befumene isityhilelo esivela kuThixo. Wathi eso sityhilelo liLizwi likaThixo iBhayibhile.
Kwakumkhathaza uBoyle ukubona uninzi lwabantu lungazi nowathwethwa ngeBhayibhile yaye luneenkolelo ezingenasihlahla. Wayezibuza ukuba, kutheni abantu abaninzi besuka bakholelwe izinto abazifundiswe ngabazali babo okanye basuke balandele iinkolelo zomndilili waloo ndawo bahlala kuyo? UBoyle waba nomnqweno omkhulu wokunceda abantu bayazi kakuhle iBhayibhile.
Ngenxa yoko, uBoyle wanikela ngemali ukuze axhase ukupapashwa kweBhayibhile ngeelwimi ezininzi. Ezi lwimi ziquka iilwimi zomthonyama zakuMntla Merika, isiArabhu, isiIrish, isiMalay, kunye nesiTurkish. URobert Boyle wayengumntu onesiphiwo kodwa othobekileyo yaye enomnqweno omkhulu wokwazi inyaniso ngokuphathelele yonke into, aze ancede nabanye ukuba bayifumane.
Wazalelwa eIreland ngowe-1627
Ubizwa ngokuba nguYise wezifundo zemichiza
Sisazinzulu sokuqala esidumileyo ukupapasha iindlela esasizisebenzisa xa sisenza uphando.
Iincwadi zakhe zaba negalelo kubomi bukaMhlekazi uIsaac Newton, owayephila ngexesha lakhe.
Waxhasa ukuguqulelwa kweBhayibhile ngeelwimi ezininzi
Wafela eNgilani ngowe-1691, eneminyaka engama-64.
URobert Boyle wayesazi ukuba kwakude kudala ngonyaka wowe-1573, iqela elithile labaphengululi lalisele liqalisile ukuguqulela iBhayibhile ngolwimi lwesi-Irish. Ngowe-1602 bapapasha inxalenye yeBhayibhile edla ngokubizwa ngokuba yiTestamente Entsha. Kamva, ngowe-1640 kwagqitywa ukuguqulelwa kweZibhalo zesiHebhere, ezibizwa ngokuba yiTestamente Endala ngabantu abaninzi. Le Bhayibhile ayizange iprintwe de kwango-1685, emva kokuba uBoyle ekhuphe imali yokuba iprintwe. Okubangel’ umdla kukuba neencwadi ezingaphefumlelwanga zazisele ziguqulelwe ngesi-Irish. Ezi ziincwadi eziyingqokelela yemibhalo engekhoyo eBhayibhileni nedla ngokudityaniswa neBhayibhile ize ipapashwe nayo ngokungathi yincwadi enye. Noko ke, ekubeni wayengumthandi wenyaniso, uBoyle wala ukupapasha ezo ncwadi zibubuxoki.